Kajawaabistaada Dhibaatooyinka Warbaahinta Bulshada ayaa dhaawaceysa mihnaddaada | Martech Zone
Jawaabtaada Dhibaatada Warbaahinta Bulshada ayaa dhaawaceysa xirfaddaada
Saturday, April 20, 2013 Axad, Abriil 21, 2013 Gowraca Robby
Craig Sunter oo ah xuquuqaha Xuquuqda daabacaadda
Ma jirin wax yare oo dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada intii lagu jiray dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee dhowaan ka dhacay Boston. Bogaggaaga Facebook iyo Twitter waxaa lagu soo raray waxyaabo aad u tixraacaya dhacdooyinka daqiiqad-daqiiqad ka dhacaya. Xaqiiqdii, inbadan oo kamid ah macno malahan macnaha guud.
Sidoo kale ma jiraan wax yar oo maareeyayaasha sumcadda suuqgeynta warbaahinta bulshada kuwaas oo u hanqal taagaya qaababka ugu wanaagsan inta lagu jiro xiisadda. Stacy Wescoe ayaa qoray: Waxay ahayd inaan is joojiyo oo aan idhi, 'Maya, dadku uma baahna inay hadda arkaan,' oo waxaan uga tagayaa boggeyga Facebook faaruq inta maalinta ka hadhay. " John Loomer ayaa ka digaya in "Farriinta noocyadu inta badan u soo baxaan si aan daacad ahayn xilliyadan." Pauline Magnusson ayaa tiri, "Daqiiqad musiibo ah, si kastaba ha ahaatee, taasi maahan waxa ay dhagaystayaasheena u sii baahan yihiin."
Iyo on iyo on.
Inta badan qof kastaa wuxuu siiyaa talo isku mid ah, runtiina waxay xitaa soo bandhigaan isla soojeedin sida hal lambar liiskooda. Steven Shattuck wuxuu ugu yeeraa “Isla markiiba Disable Tweets, Post iyo Emails.”
Sababta Sababtoo ah sida BlogHer's Elisa Camahort ayaa qortay:
Ma dooneyno inaan noqono hay'adda si badheedh ah uga hadlaysa farsamada gacanta ee carruurta, halka ay bulshadeennu ka sugayso inay ogaato inta carruur ah ee ku dhaawacmay ama ku dhintay toogashada iskuulka. Ma dooneyno inaan noqono urur dhiirrigeliya heshiis weyn oo ku saabsan qalabka isboortiga iyadoo bulshadayadu ay sugeyso inay ka maqasho saaxiibadood iyo qaraabadooda maratoonka.
User Isticmaalaha Flickr Craig Sunter
Aniga oo isku dayaya in aan fahmo falcelintan, waxaan la kulmay faallooyin ka yimid Mary Beth Quirk at Macaamilka. Way samaysaa qodobka soo socda:
Ganacsiga iyo naxdinta leh, dhacdooyinka murugada leh ee ka dhasha luminta nolosha aadanaha uun ha isku qasmin.
Dhamaanteen waxaa na saameynaya dhibaato weyn. Kulligeen shucuur ayaynu nahay. Dhaqdhaqaaqa ganacsi ee maalinlaha ah wuxuu umuuqdaa mid aad muhiim u ah marka aan la macaamileyno wax argagax leh sida argagixisada, masiibooyinka dabiiciga ah, ama shilalka warshadaha.
Waan fahmi karaa rabitaanka ah inaan joojiyo shaqada. Markii Madaxweyne Kennedy la dilay (maalin jimce ah), Chicago Tribune wararka in Isniinta, gebi ahaanba xafiisyada iyo meheradaha badankood la xiray, iskuulada iyo kulliyadaha badankoodna waa la joojiyay fasallada.
Laakiin marka la eego qaraxyada iyo raadinta tuhmanayaasha, ma heli karo wax diiwaan ah oo ku saabsan qof joojinaya ama gaabinaya howlaha ganacsi ee ka baxsan Boston (marka laga reebo tallaabooyinka amniga). Qof kastaa wuxuu sii waday sameynta cilmi baarista iyo horumarinta, socodsiinta wax soosaarka, wicitaanada iibka, sameynta falanqaynta dhaqaalaha, qorista warbixinnada, u adeegida macaamiisha, iyo gaarsiinta alaabada.
Dhinac kasta oo ganacsiga ka mid ah wuu sii socday marka laga reebo mid uun. Waxaan u maleyneynaa inaan joojineyno ololeheena suuqgeynta-gaar ahaan tan warbaahinta bulshada ololeyaasha suuqgeynta - inta lagu guda jiro dhibaatada.
Maxay uga duwan tahay suuqgeynta shaqooyinka kale ee ganacsiga? Haddii “ganacsiga iyo dhacdooyinka xanaaqa aysan isku milmin” markaa maxaan uga gaabin wax kasta hoos? Maxay maareeyayaal badan oo magac leh ugu maleynayaan inay joojinayaan shaqada markay dunidu diirada saareyso dhibaato weyn? Miyaanay ahayn maareeyayaasha dhirta, maareeyayaasha iibka, maareeyayaasha xisaabaadka iyo qof kasta oo kale inay sidaa yeelaan?
Isticmaalaha Flickr khawkins04
Suuqyadu dadku kama badna ama way ka yaryihiin dadka kale. Haddii aan go'aansano inaan xirno fariimaha warbaahinta bulshada, waxaan dhihi karnaa taas qof walba waa inuu diirada saaraa musiibada mise waxaan leenahay taas muhiim nooma ahan ganacsigeena.
Hadday tahay tii hore, ka aamusnaanta baraha bulshada waxay muujineysaa inaan ka fikirno in yar oo ka mid ah dadka xirfadaha kale haysta oo weli shaqooyinkooda qabanaya halkii aan fiiro gaar ah u lahayn waxa socda.
Haddii ay tahay tan dambe, waxaan dhahaynaa suuqgeyn uma ahan muhiim sida qeybaha kale ee shirkadahayada. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay yihiin suuqleyda inaan u muuqanno aragti kooban oo ku saabsan qiimaheena. Tani waxay cadaatay markii aan isku dayay inaan arinta kaga hadlo khadka tooska ah:
@tigersharkmusic Waa. Intii lagu jiray musiibo waxaan u baahanahay inaan isu nimaadno, oo aan ku joojino soo bandhigida saliidda masaska. @burcadnimo
Marka waa tan liistadayda gaarka ah ee hababka ugu fiican inta lagu jiro xiisadda warbaahinta bulshada. Malaha waad diidi doontaa. Taasi waa waxa faallooyinka loogu talagalay:
Marka hore, kala hadal maamulkaaga si aad u ogaato in shirkadda ay xirayso ama yareyneyso howlaha - Haddii ay qorsheynayaan inay goor hore xidhaan, u diraan shaqaalaha guriga, ama ay yareeyaan waxqabadka, suuqgeyntaadu waa inay hoos u dhigtaa. Adiguna masuul ayaad ka noqon doontaa inaad go'aankan u gudbiso dadweynaha sidoo kale.
Marka labaad, dib u eeg istiraatiijiyaddaada suuq-geynta oo dhan waxyaabaha ku noqon kara xasaasi. Bandhig dukaan oo sheegaya in alaabtaadu tahay "DA BOMB" waxay u egtahay mid weerar ah sida tweet-ka oo isku mid ah. Sii wad la socoshada dhacdooyinka sida ay u kala baxayaan si aad wax uga beddeli karto haddii loo baahdo. Si fudud ha u joojinin dhamaan fariimaha la qorsheeyay, ilaa shirkadaadu sidoo kale xireyso dhamaan howlaha ganacsiga.
Ta saddexaad, dib u eeg xiriirka ganacsigaaga iyo warshadahaaga iyo musiibada hadda jirta. Haddii aad soo saarto qalabka isboortiga, qaraxii maratoonku wuxuu kugu dhiirrigelin karaa inaad ku beddesho qaar ka mid ah farriimahaaga dhiirrigelinta dadaallada aad ku wacyigelinayso hay'adaha samafalka ee aad taageerto ee ku xidhan dhibaatada. Ama, waxaad u baahan kartaa inaad hesho hab aad si toos ah uga caawiso. (Tusaale ahaan: wixii uu sameeyay Anheuser-Busch ka dib duufaantii Sandy.)
Tan afraad, ka taxaddar muujinta dareenkaaga. Qof kastaa wuu ogyahay in qof kastaa uu ka fekerayo dhibbanayaasha musiibada hadda jirta. Ilaa iyo inta aad ka hayso wax aad ku darto mooyee "Quluubteenu way kacsan tahay…" waxaa laga yaabaa inaadan waxba u oran sumad ahaan. Xaqiiqdii maahan inaad noqotid Epicurious ama Kenneth Cole. Waana inaad u badan tahay inaad sharraxdo oo keliya waxa shirkaddaadu ka qabanayso jawaab ahaan haddii macluumaadkaasi saameyn ku yeesho macaamiishaada iyo u doodayaashaada.
Tusaale ahaan, haddii aad sameyneyso tabaruc lacageed, ha ka hadlin inta lagu jiro dhibaatada. Laakiin haddii shaqaalahaagu dhiig bixin doono, dadka la socodsii inay dib u dhac ku imaaneyso soo celinta wicitaannada iyo emayllada.
Jawaabtaada dhibaatada bulshada ee warbaahinta waxay dhaawaceysaa xirfadaada. Haddii aad sameyso waxa ay khubaradu yiraahdaan oo aad xirto dhammaan farriimaha otomaatiga ah, waxaad ku tusineysaa in suuqleyda ay yihiin dadka kaliya ee xasaasiga u ah inay joojiyaan shaqada oo ay diiradda saaraan waxa muhiimka ah, ama waxaad muujineysaa in suuqgeyntu aysan muhiim u ahayn ganacsiga kale shaqooyinka. Labada doorashoba waxay si liidata uga tarjumayaan xirfadda.
Aynu ka dhigno suuqgeyn muwaadin heerka koowaad ah. Aynu la shaqeyno xirfadlayaal kale oo ku takhasusay cilmiga kale si aan ula dhaqanno si habboon, si caqli gal ah u qorsheyno, oo aan ula dhaqano si bini'aadanimo ah.
Xor ayaad u tahay inaad diido hoosta.
Tags: suuq geynta dhibaatadafalsafada suuq geyntaistaraatijiyad marketingMedia Social Suuqmusiibo baraha bulshada
Apr 20, 2013 at 11: 45 AM
Nabade Robby -
Waan ku faraxsanahay inaad igu soo xigatay qeybtaada, waxaanan u maleynayaa in baaritaankaaga arrimaha murugsan ee ku lug leh beddelka farriinta suuqgeynta qofka ay ku socoto masiibo qaran ay mudan tahay.
Taasi waxay tiri - waan kugu raaci doonaa.
Waxaad qoreysaa, "Haddii aan go'aansano inaan xirno farriintayada baraha bulshada, waxaan dhihi karnaa in qof walba uu diiradda saaro masiibada ama waxaan dhahnaa muhiim kama nihin ganacsigeenna."
Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay laba geesood been ah - kuwani ma ahan labada fariin ee kaliya ee suurto galka ah ee lagu soo gudbiyo doorashada si loo hakiyo ololaha suuq geynta otomaatiga ah inta lagu jiro waqtiga musiibada.
Aniga naftayda, waa aqoonsi in dhagaystayaashayda, ay jiraan dad ku jira heerar kala duwan oo murugo leh. Iyo kuwa kale oo laga yaabo inaanay murugoon haba yaraatee. Laakiin sababta oo ah kakanaanta ficil-celinta aadanaha ee musiibada iyo luminta, gaar ahaan baaxad weyn, waxaan aaminsanahay jawaabta kaliya ee anshaxeed inay tahay in la isku dayo inaan lagu darin qof murugo leh farriin otomaatig ah oo otomaatig ah oo glib, xanaaq, ama haddii kale waxyeello u geysan karta qof murugaysan - gaar ahaan ogaanshaha inay jirto fursad wanaagsan oo * dad badan * oo ka mid ah dhagaystayaashaydu ku jiraan murugo.
Ma ahan wax badan oo aan aaminsanahay inaan ku hagi karo dhagaystayaashayda halka ay tahay in diirada la saaro. Taasi waa inaan ku rajo weynahay inay yihiin dad nolol buuxda leh, nolol taajirnimo leh oo dadku muhiimad badan ka helaan faa'iidooyinka. Waxaan rajeynayaa in ganacsigeygu uusan aheyn waxa ugu muhiimsan adduunkooda, waxaana doortaa inaan farriinta suuqgeynteyda u waafajiyo si masiibo ah.
Aniga naftayda iyo lammaanahayga, intaan xidhnay farriimaheena otomaatiga ah, kama aanan joojin la xiriirka dhagaystayaasheena. Waan ogeyn inaan ubaahanahay inaan si gaar ah gacan-saar ula yeelano dhageysiga dhagaystayaasheena. Halkii aad isku dayi lahayd inaad si deg deg ah isku dhaafsato farriimaha otomaatiga ah. Way fududahay in la hakiyo isku-xigxiga otomaatiga ah ee "wada-hadalka bilawga ah" sida waxyaabaha baraha bulshada inta badan la soo dhigo oo la dhajiyo casriyayn yar oo qalbi furan, iyo sidoo kale in diiradda la saaro ka-qaybgalka tayada. Anaga ahaan, tani waxay ahayd jawaabta aan dooranay waxa dhagaystayaasheena ay u muujiyeen baahi.
Cusbooneysiinteenii ugu horeysay ka dib markii qaraxu dhacay wuxuu ahaa sawiro fudud oo orodyahan leh ciwaan cibaado leh oo muujinaya ducooyinkeena bulshada Boston iyo orodyahanada maratoonka. In ka badan aragtida 80,000 (in ka badan 20K saacado yar gudahood), waxaan ku doodi lahaa inay ahayd farriin suuqgeyn ah oo la macaamishay dhagaystayaasheena si aad uga habboon intii aan si fudud u oggolaan lahayn farriimahayaga iswada.
Anaga ahaan, qiimaha dhabta ah ee astaan ​​ahaan waa mid aad muhiim u ah, maahan oo keliya xilliyada musiibada, laakiin had iyo jeer. Summad ahaan, waa muhiim in la iswaafajiyo ficiladeena iyo cidda aan dhahno waxaan nahay, in la adeegsado qeexida Seth Godin ee sax ahaanshaha. Waxaan nahay dad si dhab ah u daneeya macaamiisheenna - ma ahan oo keliya ilaha faa'iidada, laakiin sida dadka dhabta ah ee leh dareenka dhabta ah, oo qaarkood aad u adag xilliyada masiibada iyo murugada. Inaad noo noqoto mid dhab ah waxaa ka mid ah hubinta fariintayada suuq geynta inay tan uga jawaabto si xasaasi ah inta lagu jiro xilliyada masiibada qaran iyo murugada.
Siyaabaha qaarkood - waxaad xitaa oran kartaa joojinta farriinta otomaatigga ah ee suuq-geynta xilligan oo kale waxay ka timaaddaa ixtiraam loo hayo awoodda weyn ee howlaha suuq-geynta, laakiin awooddu waxay la timaadaa mas'uuliyad ah in si caqligal ah loo isticmaalo.
Waad ku mahadsantahay bilowga wada hadalka - waa mowduuc aad muhiim u ah in la iska indhatiro, waxaan qabaa.
Apr 20, 2013 at 1: 22 PM
Waad ku mahadsantahay faallooyinka, Pauline
Ujeeddadaydu waxay tahay joojinta farriimaha otomaatiga ah inta lagu jiro xiisadda maxaa yeelay "waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah oo laga walwalo" waxay umuuqataa mid aan waafaqsanayn xaqiiqda ah inaanan hakin wax kasta oo kale oo ganacsigeenu qabanayo. Waa maxay sababta ay sii wadida suuq-darrida uga sii xasaasisan tahay sii wadida iibinta, sii wadista filashada dadka inay shaqada ku yimaadaan waqtiga loogu talagalay, ama sii wadista u furan dadweynaha?
Anigu kama soo horjeedo haba yaraatee in magacyadu yihiin kuwo dhab ah. Waxaan u maleynayaa inay jiraan xaalado aan u baahanahay inaan ka jeesano feejignaanta qarankeena oo aan ka weecino dhamaan dhinacyada ganacsiga dhanka musiibooyinka. Taasi waa sababta aan u tixraacay luminta Madaxweyne Kennedy.
Welwelka aan ka qabo ayaa ah in iswaafaq la'aanta udhaxeysa dabeecada suuqleyda iyo dhaqanka anshaxyada kale ee ganacsiga. Waxaan u maleynayaa in iswaafaq la’aantaasi waxyeellaynaya xirfadda maxaa yeelay waxay ka dhigi kartaa suuqleyda inay u muuqdaan kuwo aan muhiim ahayn ama waxay u muuqan karaan kuwo xasaasi ah.
Waxaan rabaa suuq geyn si aan u helo ixtiraam badan. Yaraynta waxqabadka suuq geynta dadweynaha xilli maadooyinka kale badankood ay kusii socdaan xawaare buuxa sida ay u xoojin doonto suuq geynta muwaadin heerka labaad ah.
Apr 20, 2013 at 1: 57 PM
Waan sii wadi doonaa diidmada. Waxaad qori doontaa, “Waxaan doonayaa suuq-geyn si aan u helo ixtiraam badan. Yaraynta nashaadaadka suuq geynta dadweynaha xilli qeybaha kale badankood ay kusii socdaan xawaare buuxa sida ay u xoojin doonto suuq geynta muwaadin heerka labaad ah. ”
Si daacadnimo ah, waxaan aaminsanahay in taa beddelkeeda ay run tahay. In ganacsi loo sameeyo sida caadiga ah waxqabadka suuqgeynta waqtiga masiibada qaran waxay yareyn doontaa ixtiraamka suuqleyda - taasi waxay xoojineysaa aragtida dadweynaha ee suuqgeynta iyadoo diiradda la saarayo doolarka awoodda leh ee aan dan ka laheyn baahiyaha dhabta ah iyo shucuurtooda macaamiishooda. . Meheraddayda, jawaabta macaamiishaydu waxay ilaalisay ra'yigayga. Si daacadnimo ahna - anigoo ah meherad yar, waxaan joojinay howlihii kale. Aniga oo ahaa maamule HR noloshii hore, waxaan tuhunsanahay inay jiraan shaqooyin badan oo ganacsi oo kale oo aan dhicin galabtii Isniinta. Ma haysto lambarro aan ku caddeeyo kiiska midkoodna, laakiin hoggaamiye kasta oo caqli badan oo ganacsi wuxuu ku xisaabtami lahaa waxa shaqaalihiisa ama shaqaalaheedu u baahan yihiin xilligaas, taasna waxaa laga yaabaa inay si fiican ugu jirtay inay dadka qaarkood u oggolaadaan inay xilli hore guriga tagaan haddii ay suurogal tahay. Hadafku waa muhiim, laakiin dad la'aan (macaamiil ama shaqaale), ujeedku ma dhaco.
Waa maxay ujeedka suuqgeynta? Si loo caddeeyo qiimaheeda ama lagu dhiirrigeliyo macmiilku inuu sameeyo go'aan habboon oo la xiriira astaanta. Haddii ay tahay tii hore, markaa hubaal, Tweet on. Haddii tan dambe, waxaan si xoog leh u maleynayaa hakad in la helo wadnaha suuqa iyo jawaabta ku habboon laga yaabo inay waxtar badan leedahay. Waad ku doodi kartaa dhammaan waxaad rabto qiimaha suuqgeynta sida cidlo gooni ah. Waxaan uga doodi doonaa sida xiisaha leh in suuqgeyntu aysan aakhir ahayn laakiin ay tahay macne lagu gaarayo. Taasna anigu uma arko ixtiraam la'aan xirfadda ugu yaraan.
Tusaale ahaan - gaarigeyga, baatroolku waa macno lagu gaadho yool. Aad ayaan u ixtiraamayaa, laakiin keligiis, iyada oo aan lahayn habka gaariga, waxba ma qabanayso. Oo la’aanteed, baabuurkaygu ma socon doono. Diirad gaar ah oo la saarayo tayada shidaalkeyga iyada oo aan fiiro gaar ah la siinin nidaamyada kale ee baabuurkeyga kama dhigeyso in gaarigeygu si hufan u shaqeeyo.
Apr 20, 2013 at 2: 11 PM
Aniga ahaan, astaanta joojisa alaabada ay soo saarto laakiin sii wadaysa iyaga, silsiladda dukaanka kafeega ee joojisa tweet gareeysa laakiin sii iibineysa kafeega -waxaa ah noocyada aan xushmad u waayo. Waxay u egtahay inay la baxsanayaan suuqgeynta inta badan, laakiin waxay dareemayaan inay u baahan yihiin inay hoos u dhigaan mugga inta lagu jiro masiibo.
Uma maleynayo in suuqgeyntu ay tahay cid gooni ah. Waxaan u maleynayaa inay (ahaato) mid xiriir dhow la leh dhaqanka shirkadda iyo xiriirka ay la leedahay macaamiisheeda iyo u doodayaasheeda.
Taasi waa sababta aan u doonayo inaan u arko magacyadu inay gaarayaan go'aanno wax ku ool ah, halkii aan ku keli ahaan lahaa waaxda suuqgeynta. Waxaan u maleynayaa in sidaas la sameynayo ay kordhin doonto ixtiraamka suuq geynta, maxaa yeelay shirkaddu dhammaantood waxay ku wada socon doontaa isla bogga halkii ay ka eegi laheyd uun sidii ay u dhajin lahayd si ay u weyneyso ra'yiga dadweynaha.
Apr 20, 2013 at 2: 52 PM
Waxaa laga yaabaa inaad kali ku noqon karto aragtidaada, Robby! Wadahadal weyn!
Apr 20, 2013 at 12: 11 PM
Waa inaan ku raacsanahay Pauline. In kastoo aan u maleynayo inay muhiim tahay in laga feejignaado waxa sumadeenayaashu ay ku sameynayaan duullimaadka (akhri = jadwalka), isla mar ahaantaana waa inaan xusuusanno inaan waxyaabaha ku sii hayno macnaha guud.
Dhamaan ganacsiyada oo dhan saameyn isku mid ah kuma yeelan doonaan masiibo qaran. Jawaabta dadweynaha looma baahna nooc kasta, laakiin waxay kuxirantahay ganacsiga / suuqa shaqsiyeed. Haddii aad tahay soo saaraha dharka carruurta ama shirkad rashka ah, waxaa laga yaabaa inaad leedahay jawaab ka duwan baraha bulshada oo ku saabsan dhacdooyinka ka socda Boston iyo shirkad martigelinaysa ama goobta dayactirka baabuurta. Sidoo kale, goobta dayactirka gawaarida waxaa laga yaabaa inay rabto inay daawato farriintooda dadweynaha haddii ay dhacdo musiibo ku lug leh bambo gacmeed.
Ilaa iyo inta gaabiska ah ee suuqgeynta warbaahinta bulshada ee waddanka oo dhan loogu talagalay noocyada, marwalba waxaan u maleynayaa inay taasi tahay go'aan caqli gal ah. Dabcan, taasi waa in laga miisaamaa sida ay u badan tahay suuq geynta nooc summad leh. Shirkadeyda, tusaale ahaan, waxay sameysaa qadar yar oo suuqgeynta warbaahinta bulshada ah hada, sidaa darteed joojinta riixdeena dijitaalka ah illaa iyo ka dib markay dhacdooyinka muhiimka ah ee musiibadu dhamaato waxay dili doontaa wax kasta oo aan gaarsiin lahayn dadweynaha aan sameyno, maadaama 100% fariinteenu tahay lagu soo saaray internetka.
Midda dheer iyo tan gaabanba waa in ay tahay xarriiq wanaagsan oo lagu socdo. Xaqiiqdii, milkiilaha meherad caqli badan ayaa ogaan doona ficilada miyir-qabka ah ee uu ka qaadanayo wixii ku saabsan farriintooda bulshada xilliyada dhibaatada. Ugu dambayntiina, waa dadweynaha kuwa go'aan ka gaadhaya haddii falalka ay qaadeen sumaddaasi ay dhadhan fiican yihiin iyo in kale.
Apr 20, 2013 at 1: 28 PM
Waad ku mahadsantahay faallooyinka, John.
Waa xariiq fiican in lagu socdo. Waxaan aad uga walaacsanahay ixtiraamka mihnadda suuqgeynta marka loo eego sida aan uga hadlayo waxa ugu wanaagsan ganacsi gaar ah. Waxaan u maleynayaa in meheraddu ay isku dubbarido dadaalkeeda. Hadday qadka ka aamusaan, waa inay fiiriyaan xirnaanshaha albaabadooda waaxyaha kale sidoo kale.
Waxaad ku saxantahay in dadwaynuhu go aansan doono in talaabooyinka ay qaadeen sumadu ay dhadhan fiican leeyihiin iyo in kale. Laakiin taas ayaynu hore u ogaanay dadweynuhu kuma kalsoona sumadaha wax badan oo laga bilaabo.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu muujiyo kalsoonida waa in la is waafajiyo. Shirkad xirtay dhowr saacadood si ay dhiig u siiso isla markaana u cusbooneysiisay farriintooda internetka si ay u bixiso waxay muujineysaa joogteyn. Shirkad joojisa dhammaan suuqgeynta laakiin furnaata haddii kale waxay muujineysaa in farriintoodu dhab ahaan udub dhexaad u ahayn dhaqankooda kadib.
Apr 20, 2013 at 1: 39 PM
Waad ku mahadsantahay jawaabta Robby.
Waxaan ku raacsanahay in meheraddu ay isku dubarido dadaalkeeda, hase yeeshe, sababtoo ah meheraddu waxay joojineysaa kor u qaadista alaabteeda muddo xaddidan, uma baahna inay yareynayso shirkadda mas'uuliyadda ka saaran meelaha kale. Haddii aan joojin lahaa suuqgeynta musiibo qaran awgeed, macnaheedu maahan inaanan wali haysan macaamiil jira oo aan ku sii farxo. Waxaan u baahanahay inaan u adeego macaamiishaas aan xilalka u qaaday si aan ugu faraxsanaado.
Tani waxay u badan tahay sababta aysan macaamiisha ugu kalsoonayn noocyada inay wax ku bilaabaan. Waxaan sidoo kale u maleynayaa inay leedahay wax badan oo la sameeyo xaqiiqda ah in inta badan ololayaasha suuqgeynta aysan dhab ahaantii diirada saarin baahida macaamiisha. Sida aan u arko, waxay ku saabsan tahay helitaanka cilad maskaxeed si macaamiisha looga caawiyo inay lacagtooda kala qayb qaataan. Ganacsigeyga waxaan u taagay si ka duwan sidii hore. Si aad macaamiisha ugu kasbato kalsooni, waxaad u baahan tahay inaad ku bartaan heer shaqsiyeed. Ganacsiyada maah-maah-maah-maahmaahdu waa tusaalaha koowaad ee tan. Waxay yaqaanaan sida loola macaamilo macaamiisha sida aadanaha, oo ka soo horjeeda inay u arkaan calaamad doolar oo kaliya albaabka ka soo gala - taasina waa ugu dambeyntii waxa niyad jabsan macaamiisha markay bilaabaan inay ka dukaameystaan ​​dukaanka weyn ee ganacsiga iyo ganacsiga yar yar ee wadada. . Maxaa dhacaya? 'Ninka yari' ganacsigiisuu ka baxaa waxa kaliya ee harayna waa bakhaarka weyn ee sanduuqa oo dhamaanteen waan ognahay waxa ka soo baxa: tartan yar oo silsiladaha waaweyn ah waxayna bilaabayaan inay sare u qaadaan qiimaha si u dhiganta adeega macaamiishooda. Waxay noqoneysaa iibinta iyo sameynta lacag ee maahan run ahaantii u adeegida macaamilka.
Sidaas darteed, waan duugaa. Ujeeddadu waxay ku saabsan tahay joogtaynta oo anigu si fudud uma dareemayo taas maxaa yeelay aag ka mid ah shirkadda ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho, taasi waxay ka dhigan tahay inaan u baahan nahay inaan si buuxda u joojino howlaha kale ee ganacsiga. Suuq geyntu waa mid ka baxsan, laakiin markaad leedahay waajibaadyo jira oo ah inaad fuliso, waxaa muhiim ah in la fahmo in waajibaadkaas la fulinayo.
Apr 20, 2013 at 2: 01 PM
Waa la isku raacay, Yooxanaa. In kasta oo aan ahay milkiile ganacsi oo yar iyo maamulihii hore ee HR, haddana sidoo kale waan ku fiicanahay qiimaynta baahiyaha shaqaalahayga iyo / ama qandaraasleyda xilligan oo kale oo waxaan u oggolaanayaa kuwa kale inay nastaan ​​ama ay aadaan guriga iyada oo la eegayo dhacdo aan caadi ahayn haddii loo baahdo noqo Xaqiiqdii waxaan ku leenahay waajibaad macaamiisheena. Laakiin - dadka ii oggolaada inaan la kulmo hadafkeygu wax kasta oo muhiim ah ayey ii yihiin sida macaamiishayduba u yihiin.
Apr 22, 2013 at 9: 46 AM
Waan ku raacsanahay faallooyinkaan.
"Waxaan sidoo kale u maleynayaa inay leedahay wax badan oo la sameeyo xaqiiqda ah in inta badan ololayaasha suuqgeynta aysan dhab ahaantii diiradda saarin baahida macaamiisha"
Tani waa sababta aan ugula mid dhigayo suuqgeynta badan baabuurta saliida masaska, ama uguyaraan ugu laabanaayo maalmihii PT Barnum. Suuqgeyntu diiradda ma saareyso baahida macaamiisha. Taa baddalkeeda waxay u sheegaysaa macaamilka "Waxaad u baahan tahay tan." Aan faraxsanayn? "Waxaad u baahan tahay Brand-X!" Waa moodel duug ah. Erayadu way isbadalaan, qaababka soo bandhigida wey isbadalaan, laakiin ugu danbeyn fariinta wali waa isku mid. "Waxaad u baahan tahay tan." Marka runta, uma baahni taas.
Calaamadda aan ku kalsoonaanayo, ayaa ah astaanta muujineysa dadaalka mas'uuliyadda bulshada ee ka saarantahay qaabkeeda - waana yar yihiin. Ma dhahayo magacyadu waxay u baahan yihiin inay xiraan fariin ahaan. Kaliya hoos u dhig walxaha otomaatiga ah, oo u oggolow xakameynta aadanaha. Si kastaba ha noqotee, sidaad horay u sheegtay mararka qaarkood taasi waa wax aad u fudud ..
Robby, waxaad la timid dhibco badan oo wanaagsan. Uma maleynayo in ganacsigu u baahan yahay inuu ku yimaado burburin, laakiin suuq-geynta waxay u baahan tahay inay ogaato inay jirto waqti iyo goob, fariintaaduna way ka sii xoog badnaan kartaa sida aad uga jawaabeyso musiibo halkii aad ku ilaalin lahayd inta jeer. Suuqgeynta suuqgeynta dartiis waxay umuuqataa aragti gaaban, oo lid ku ah mas'uuliyadda madaniga ah. Si looga dhigo suuqgeynta muwaadin heerka koowaad ah, waa inay waafaqdaa fikradaha waajibaadka madaniga ah iyo masuuliyadda. Taasi waxay ka dhigan tahay in bulshada guud ahaan laga hor mariyo oo kaliya loo oggolaado dadka inay si firfircoon kuu raadiyaan markay u baahdaan. Xusuusnow waayo-aragnimada aadanaha ee socda, oo fadhiiso kursiga dambe arrimaha muhiimka ah.
Si kastaba ha noqotee, sida John iyo Pauline, waxaan u maleynayaa in mid ka mid ah farqiga ugu weyn ee u dhexeeya suuqgeynta (gaar ahaan suuqgeynta warbaahinta bulshada) ay tahay in dukaamada furan ay baahidooda buuxiyaan, xitaa haddii ay tahay meel la isugu yimaado.
Waxaan u maleynayaa in arrinteydu tahay, gaar ahaan tweets otomaatig ah, waxaan u baahanahay inaan tixgelinno baahida macaamiisha. Sababtoo ah haddii aynaan sidaa yeelin markaa waxba ma aha saliidda abeesada xilligaas.